Blog Post Nhamba 1,000 - Rarama kubva kuTechpoint! | Martech Zone
Ndizvozvo! Blog post nhamba chiuru - rarama kubva ku Yegumi yegore Techpoint Summit muIndiapolis, IN. Musangano wehunyanzvi muIndiana? Sezvineiwo, ini ndiri mune yakawanda-chiteshi kushambadzira chikamu ndichitaura nezwi, tsambambozha Marketing, uye kubatanidzwa blogging zvekushambadzira pamwe ne zviri pamutemo inosangana neimwe neimwe.
Zvinoshamisa, Gavhuna Mitch Daniels joker nezve izvi futi mangwanani ano mushure mekuburitswa kukuru naDavid Baker, CEO we Yekutanga Internet Bank, uye Ron Brumbarger, CEO we Mhinduro dzeBitWise.
Imwe yehuwandu hunoshamisa hwakapihwa naGavhuna Daniels ndeyekuti mabhizimusi ekutanga muIndiana ane 20% yepakati kudzikira mumitengo yekutangisa nekuda kwemutengo wehupenyu, mutero zvinokurudzirwa uye yakaderera mari yevashandi yemubhadharo munyika.
Kune makambani anoenderana nehunyanzvi, Techpoint nehurumende yenyika vakashandawo kugadzira iyo 21st Century Fund pamwe nehoriyamu hombe yemitero inokurudzirwa pane itsva patent-inogadzirwa kutengesa, kutsvagisa nekusimudzira kudyara, uye rubatsiro rwemabasa.
Chinhu chakanaka nezveIndiana ndechekuti mutengo wekurarama wakaderera uye Indianapolis yakaiswa pakati nepakati kumavirira. Dai iwe waizotanga tekinoroji bhizinesi, avhareji chengetedzo ye20% inogona kuita mutsauko pakati pekambani yako mukana wekupona uye kugona kukwikwidza munzvimbo.
Kuzivisa: Ini ndinowanzo shandira kambani yaRon mukubatsira vatengi vake nemaitiro enhau enhau. Ron nenyasha akabhadhara nzira yangu muchiitiko nhasi (ndatenda!). Zvakare, kambani yandinoshandira izere-nguva ine rombo rakaringana kuve naDavid semushambadzi! Uye zvechokwadi, ndinotenda kune wangu webasa nekundipa iro zuva rekuzorora!
Chingori chidimbu: Gara wakatarisira iyo $ 1,000 1,000 Kupa mukupemberera chiuru chemapositi, chiuru chakasarudzika vashanyi pazuva, uye chiuru vanyoreri vanonyorera… woohoo! Takazviita!
Mbudzi 9, 2007 na4: 08 PM
Rega ndive wekutanga (online) kuzokorokotedza iwe! Funga nezve ese ma1 nema0!
Mbudzi 9, 2007 na5: 43 PM
Ndinokunzwa iwe Doug. Nguva pfupi yadarika ndanga ndichiwana akawanda emaimeseji asiri iwo anouya kuburikidza neinbox yangu. Zvinonakidza kuti iwe wakataura uchimhan'arira vakuru vanopa. Zvinogona kungoitika rimwe remazuva ano.